Madheshvani : The voice of Madhesh - नयाँ सोचका साथ अघि बढ्नुपर्छ : राकेश कुमार झा
नयाँ सोचका साथ अघि बढ्नुपर्छ : राकेश कुमार झा
वडाध्यक्ष गौर नगरपालिका वडा नं. २, रौतहट
२०६१ सालमा नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकबाट राजनीतिक यात्रा शुरू गरी स्थानीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबाट निर्वाचित भएका गौर नगरपालिका वडा नम्बर २ का वडा अध्यक्ष राकेश कुमार झासँग आर्थिक वर्ष २०७५।२०७६ मा वडा स्तरीय योजना तथा समसामयिक विषयवस्तुको विषयमा मधेशवाणीका लागि राकेश कुमार यादवले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
० चालू आर्थिक वर्षमा तपाईले वार्डमा विकासका लागि कुन कुन योजना राख्नु भएको छ ?
— चालू आर्थिक वर्षमा नगरपालिका कार्यालयबाट ५० लाख रकम बजेट पाएको र सो मध्ये १० लाख रूपैयागौर राईस मिलकोजगगा अधिग्रहणको लागि गएको र बाँकी रहेको ४० लाख रूपैयाको विकास निर्माणमा खर्च गर्ने योजना बनाएको छु ।
० के कस्ता योजना छनौट गरी कार्यान्वयन गर्नु हुन्छ ?
— आफ्नो वार्ड अंतर्गत पर्ने महादेवपट्टी टोलमा पानी निकासको समस्या रहेको हुँदा सो वार्डमा तत्काल नाला निर्माणको लागि १० लाख, सड़क ढलानमा २ लाख, धर्म संस्कृति जगेर्नाको लागि ३ लाख, सटररहित भवन निर्माणको जुड़ माध्यमिक विद्यालयमा ५ लाख, दैविक प्रकोप नियंत्रणको लागि १ लाख, महिलाहरूको सशक्तिकरणको विभिन्न शिपमूलक कार्यक्रम सञ्चालनको ६ लाख रकम छुट्याइएको छ । नयाँ सड़क निर्माणको ५ लाख, शुद्ध खानेपानीको लागि ५ लाख, नाला मर्मत, पोखरी पुर्नका लागि २ लाख रकम छुट्याइएको छ ।
० योजनाहरू कसरी कार्यान्वयन गर्ने सोच राख्नु भएको छ ?
— छनौट गरिएको योजना जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा पारदर्शिता रूपमा कार्यान्यवयन गराउने निति लिएको छु । जनताले दिएको मतको कदर गर्दै अघि बढ़ने उदेश्य मेरो रहेको छ । बजेट दुरूपयोग नहुने उदेश्यले कोटेशन र उपभोक्ता समिति मार्फत कार्य गर्ने छू ।
० नगरपालिकाले वड़ाको विकास प्रति कस्तो भावना राखेकेका छन् ?
— नगरपालिकाले सबै वडाको स्तरीय विकास होस् भन्ने सोच राखेको छ । नगरप्रमुख अजय कुमार गुप्ता विकासप्रेमी मानसिकताका भएकोले भ्याएसम्मको सहयोग गरिरहनु भएका छन् । उहाँले जनताको काम समयमा सहज रूपमा गर्नु पर्ने दबाब दिनु हुन्छ ।
० तपाई जनताको प्रतिनिधि भएर काम गरी राख्नु भएको छ, कस्तो महसूस भइरहेको छ ?
— जनताको सेवा गर्ने मौका पाएकोमा आफुलाई खÞुशी महसूस भैरहेको छ । विकासको कार्य गर्नुमा कुनै किसिमको असहज भैरहेको छैन जहा सम्म वड़ाका जनताले मलाई सहयोग गरी राख्नु भएको छ ।
० अंतमा तपाई यस पत्रिका मार्फत के सन्देश दिन चाहनु हुन्छ ?
— अहिले मुलुकमा तीन तहका सरकार रहेका छन् । स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकार रहेकोले जनताको विकासको लागि तिनै सरकार विच सहकार्य र समन्वय हुनुपर्छ । केन्द्रीय सरकारले प्रादेशिक सरकार तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसित विभेद गरे भने मुलुक र जनताको विकास हुन सक्दैन । नगर प्रमुखले वड़ा अध्यक्षलाई सहयोग गर्नु पर्ने हुन्छ भने वड़ा अध्यक्षले जनताको भावना अनुसार कार्य गर्नु पर्ने हुन्छ । आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षा स्वास्थ्यको अवस्था सुधार गर्न बढ़ी लागि गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु । रौतहटको शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था न्यून रहेकोले सुधार गर्न लगानी गर्नुपर्ने भएको हुदा यस प्रति सवैले ध्यानु दिनु पर्छ । पुरानो व्यवस्था परिवर्तन भई संघीय व्यवस्था लागु भएकोले विकासमा पनि पुराणों सोच त्याग गरी आधुनिक र बैज्ञानिक सोच लिई सहयोग गर्न स्थानीय सित आग्रह गर्दछु ।